Sida Loo Sameeyo Degel Ka Dib Iibsiga Magaca Domain? - Step By Step Guide
Qeybta boostada:Domain / Marti gelinta / Degel
Kuwo badan ayaa laga yaabaa inay aamminsan yihiin inaad u shaqaalaysiiso degene websaydh ah si aad u dhisto degel laakiin xaqiiqdu waxay tahay in maalmahan tikniyoolajiyaddu horumar ku filan samaysay, adigu waad sameyn kartaa adigoon aqoon farsamo lahayn.
Waxaad ubaahantahay degel dhise wanaagsan si aad ugu dhisto degel hadba baahidaada. Tallaabooyinka waa kuwo aad u fudud. Waxaan sharxayaa hage xalka saxda ah ee xalinta dhibaatadaada abuuritaanka degel dhameystiran.
Kadib markaad iibsato magac domain, waxaad ubaahantahay madal martigelin marka hore. Meel martigelin ah oo keydisa boggaaga internetka. Marka labaad, In la dhiso degel, waxaad u baahan tahay degel dhise. Ugu dambayn, wax yar oo maskax abuur ah.
Qiimaha dhismaha websaydhka
Dhismayaasha Websaydhka Caanka ah
Dhisida degel leh Magaca Domain
Dejinta bogga iyo sidoo kale martigelinta
Fikirka Kama Danbaysta ah:
Laakiin taa ka hor, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ogaato inta ay dhab ahaan ku kacayso dhismaha websaydh wanaagsan oo xirfad-raadis ah. Jawaabtu waa gebi ahaanba waxay kuxirantahay nooca bogga aad rabto. Degel ganacsi oo yar ayaa ku bilaabmaya qiimo ka yar $100 sannad kasta oo ay ku baxdo dhowr kun oo doolar sanadkiiba iyada oo shuruudaha xirfadeed ee aadka u daran.
Waxaan shakhsi ahaan kula talineynaa macaamiisheenna inay ku bilaabaan degel maalgashi yar markaad ganacsigaaga ku koraan, waxaad ku dari kartaa astaamo horumarsan.
Waxaa jira qaar badan oo ka mid ah kuwa dhisaya degellada internet-ka taasi waxay kaa caawineysaa inaad aasaasto degel internet ah oo xirfad u eg. Halkan hoose waxaan kuugu taxay sida ugu fiican.
Dhismaha Websiteka Dreamhost
Dhismaha Websaydhka GoDaddy
Qaar badan oo ka mid ah dhismayaasha degelladani waxay leeyihiin xarun lagu dhiso degel si fudud oo loo jiido oo loo rido. Waxa ugu dambeeya waa inaad u dhigantaa baahidaada iyo yoolalkaaga xarunta ay keenayaan.
Waad ka faa'iideysan kartaa qorshahooda tijaabada bilaashka ah haddii ay kugu habboon tahay markaa waa inaad sii wadataa adoo qaadanaya qorshahooda qiimeynta billaha ah ama sannadlaha ah.
Waa inaad koritaankaaga ku sii haysaa mudnaanta, iyadoo waqtiga la dhaafay– Ma awoodi doontaa inaad ku darto cusbooneysiin dheeri ah, ma kuu ogolaaneysaa inaad cusboonaysiiso astaamaha aad u baahan tahay, ma leedahay taageero macaamiil iyo waliba astaamo la qaadan karo. Ma kuu ogolaaneysaa inaad ka guurto xogta hal madal oo aad u guurto mid kale adigoo aan wax khasaaro ah geysan?
Dhamaanba shabakadaha kor ku xusan, shaqsiyan marwalba waxaan doorbidnaa madal is-martigelin ah. Dhismaha bogga WordPress waa ilo-furan, bilaash ah, oo wuxuu la yimaadaa kumanaan sheybaatyo horay loo dhisay iyo kordhin. Taasi waa wax weyn.
In ka badan 41 % isticmaalayaasha internetka ayaa adeegsanaya barnaamijyada WordPress. Waxaan marwalba diyaarinaa boggaga macaamiisha ee WordPress. Waxay leedahay dabacsanaan weyn oo ku dhowaad la jaan qaadi karta qalabka kale ee dhinac saddexaad.
Laga soo bilaabo aragtida SEO, waxaan aragnay tusaalooyin aad u tiro badan oo sharxaya qofna ma garaaci karo WordPress. SEO wuxuu ku saabsan yahay helitaanka darajooyinka makiinadaha raadinta sida Google Bing iwm. WordPress wuxuu la socdaa dabacsanaan badan. Tilmaamaha SEO waxay ka caawiyaan Google iyo kuwa kale inay fahmaan waxa ku jira. Raadinta mashiinka raadinta waa wax walba oo ku saabsan hagaajinta mawduucaaga si aad ugu qiimeyso booska koowaad. Tan kale, arrimaha SEO ee farsamada ah sidoo kale. Waxaad si fudud uga heli kartaa kumanaan fiidiyow ah internetka oo xallinaya su'aashaada ku saabsan WordPress isbarbardhig.
Dhisida degel marwalba waa madadaalo. Haddii aad la kulanto wax dhibaato ah inta aad abuureyso degel waxaad booqan kartaa bogga nala soo xiriir si aad ula xiriirto emaylka.
Isticmaalayaashu waxay badanaa ku dhacaan khaladaad adoo dooranaya barxad aan iskeeni karin. Waa hagaag, mahadsanid nasiib halkan ayaad nala joogtaa. WordPress waa nooc ka mid ah barxad kumanaan kumbuyuutareedyo ujeeddooyin kala duwan loo diyaariyey oo ujeeddooyin kala duwan leh. Naqshadaha oo lagu daro waxyaabo kuu oggolaanaya inaad abuurto naqshadeynta websaydhkaaga.
Haa, WordPress waa lacag la'aan, waxaad kala soo bixi kartaa websaydhka rasmiga ah. Hadda su'aasha soo baxda halka WordPress ka yimaado haddii ay lacag la’aan tahay? Jawaabtu waa adiga waxaa lagugu soo oogayaa iibsashada lahaado meel martigelin iyo domain.
Waa kuwan dalabyada ugu wanaagsan ee Maanta waa inaad fiirisaa iyaga.
Nasiib wanaag, maalmahan, Adeegga martigelinta Bluehost bixiya muuqaalada badan oo leh a 60% dhimista sicir-dhimista halka shirkadaha kale ay kugu soo dallaci karaan siyaabo kasta oo gaar ah. Tan kaliya maahan laakiin sidoo kale waxaad heleysaa domain bilaash ah oo kuugu dhowaad kugu qarash gareeya 14 ku 15 dollar sanadkii.
waad booqan kartaa xiriiriyahan si aad uga faa'iideysato dalab socda socda.
Maaha shirkad ku cusub suuqa waxay u adeegaysay macaamilka ilaa 2005. Marka taa laga reebo, haddii aad la kulanto nooc kasta oo dhib ah oo ku saabsan dejinta websaydhkaaga waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto. Waxaan marwalba idinla nahay adiga kuna faraxsanahay inaan ku caawino.
Markaad booqato bogga rasmiga ah ee Bluehost, marka xigta waa inaad gujisaa “hadda bilow” si loo sii wado dhismaha degel.
Tani waxay kuu keeni doontaa bogga xiga qorshe qiime kala duwan ah. Shakhsiyaadka iyo shirkadaha waxay ku xushaan qorshaha hadba aasaaskooda iyo nooca baahidooda. Waxaan shakhsi ahaan kugula talineynaa inaad ku bilowdo qorshe aasaasi ah. Sababtoo ah waxaad ku jirtaa heer bilow ah, maaddaama meheraddaadu u ballaadhayso heerka ku xiga, tirada booqdayaasha soo booqda websaydhkaaga, ka dib waxaad u dhaqaaqdaa inaad cusboonaysiiso qorshe.
Xitaa mar kasta oo aan u dhiso degel macmiilkeyga marwalba waxaan u soo jeediyaa inay iibsadaan qorshe aasaasi ah. Marka aan kor u qaado boggooda, waxay bilaabayaan inay soo booqdaan, ku dhowaad markay gudubto 25000 soo booqdayaasha bishiiba. Kadib waxaan u wareegayaa qorshe la cusbooneysiiyay.
Halkii, Haddii aad ku xisaabiso qiimaha guud ee hore qorshaha aadka u qaaliga ah, waxaad dareemeysaa qiimo jaban. Iyo shaqsi ahaanba, kuguma talineyno.
Waxaan khibrad badan u leenahay adeegyada noocaas ah. Waxyaabahaas oo dhan waan qabanay markii ugu dambeysay 10 sano. Waxaan kaliya ku siineynaa talada dhabta ah.
Intaa ka dib, waxay ku weydiin doonaan inaad doorato magac domain oo ku habboon. Halkan waa inaad ku dhegtaa .com. waa inuu noqdaa sida ku xusan magacaaga ganacsi oo hingaad sax ah leh. Markaad koraysid, macaamiishaada ama adeegsadayaashaadu si fudud ayey u aqoonsan karaan astaantaada iyo magacaaga domain.
Talaabada xigta ayaa ku weydiin doonta faahfaahinta aasaasiga ah sida emaylka, magac, magaca dambe, iwm. Faahfaahinta, tallaabada xigta waxaad arki doontaa lacag dheeraad ah oo ikhtiyaari ah sida amniga bogga, ilaalinta domainka, keydinta bogga. Waxaad ka iibsan kartaa xarumahan dheeriga ah goor dambe markaad u baahan tahay.
Markii aan bilaabay degelkayga macmiil, Marnaba ma iibsan karo isla markiiba. Bil ama labo kadib markii waxyaabaha ku jira degelku noqdaan ku filan, markaa waxaan hubaa inaan iibsado xarun keyd ah iyo muuqaal amni.
Intaas ka dib ikhtiyaarka lacag bixinta, ka dib markaad wax u iibsato cinwaanka iyo sidoo kale martigelinta. Masuuliyada xigta waa inaad ku rakibto WordPress boggaaga kahor intaadan usameyn dhismaha.
Markaad iska qorto koontadaada, Waxay siin doonaan xarun rakibo hal-guji oo loogu talagalay dadka isticmaala farsamada. Isticmaalayaasha doonaya inay ku rakibaan boggooda internetka iyaga oo aan caawimaad ka helin qof saddexaad.
Goorma ayaa wax walba la qaban doonaa uun “typeyoursite.com/wp-admin/” biraawsarka biraawsarka waxaad u wareegi doontaa bogga galitaanka.
Gali aqoonsigaaga soo galida waxaad arki doontaa interface-ka WordPress.
Naqshadeynta WordPress oo lagu maareeyo mowduucyo horay loo sii qeexay. Midka hore ma ahan mid soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh. Si fudud ayaad u badali kartaa adigoo gujinaya muuqaalka –>Dulucda.
Waxaad arki doontaa shaashad la mid ah sida hoos ku qoran.
Guji markaad gujiso iyo wax cusub waad qiimeyn doontaa 1000+ mawduucyo qurux badan oo WordPress ah. Halkan hal soo jeedin ayaa ah in lagu rakibo mawduuca iyadoo loo eegayo baahida ama waxaan dhihi ujeeddo. Tusaha mawduuca WordPress wuxuu leeyahay mawduucyo kaladuwan oo warshadeed. Waad u kala shaandheyn kartaa iyadoo loo eegayo sida ay caan u yihiin.
Tilmaamahan gaarka ah, Waxaan halkaan u joogaa inaan rakibo mawduuc ujeeddo badan leh oo WordPress ah ocean WP. Waxay leedahay arrimo diyaarsan. Iskeed waad ku rakibi kartaa iyaga hal guji. Oo habeyn dejintan hadba baahidaada.
Wixii ku saabsan qorista waxyaabaha ku jira boggaaga, waxaad isticmaali kartaa boostada iyo sidoo kale xarunta bogga. Qoraalada ayaa asal ahaan loogu talagalay qorista waxyaabaha ku jira baloogyada si joogto ah halka bogagga dhab ahaan loo isticmaalo bogagga sida nala soo xiriir bogga, Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, afeef, guriga, iwm.
Dhisida degel kadib iibsashada domain maahan wax dhib badan gebi ahaanba ka duwan maalmihii hore. Maalmahan, qaar badan oo ka mid ah kuwa wax dhisa ee degellada internet-ka ayaa horay loo sii dhisay iyo sidoo kale bixinta qorshe si loo qorsheeyo loona hirgeliyo degellada websaydh fudud. Muuqaalka ugu muhiimsan waa dabacsanaanta, la jaanqaadida dadka kale haddii ay dhacdo isbeddel weyn. Marka taa laga reebo, ma leedahay fiidiyowyo fara badan oo waxtar leh si loo xalliyo weydiimaha annaga lafteenna. Waxaan sharaxnay ikhtiyaarka ugufiican ee sii socon doona muddo dheer isla markaana leh wax kasta oo aad u baahan tahay.
Immisa lacag ah ayaad ka sameyn kartaa Blog Blog
Post HoreMarkaad Ka Iibsato Domain GoDaddy? Ma Adigaa Leh
Post NextSida Loo Abuuro Website -kaaga Blog